Archive du 20170405
Lalao Ravalomanana Haongan�ny HVM ihany koa ?
Hisy ny fihaonan�ireo ben�ny tan�na ny renivohi-paritany 6 sy ny tan�n-dehibe eto Madagasikara rahampitso eto Antananarivo, izay eo ambany fitarihan-dRamatoa Lalao Ravalomanana.
Lalao Ravalomanana �Fanarenana izao no atao !�
Mampalahelo, hoy ny ben�ny tan�nan�Antananarivo, Lalao Ravalomanana, fa lany andro mifanenjika amina zavatra tsy misy dikany isika,
Faravohitra Nivoaka tamin�ny fahanginany i Dada
Nitatitra ny diany nandritra ny 20 andro tany ivelany teny amin�ny trano fonenany eny Faravohitra tamin�ny mpikirakira vaovao omaly ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc.
Dr Jean Louis Robinson Tsy mbola tapa-kevitra ho kandida amin�ny 2018
Fanatsarana ny kaominina Ampasikely mba tsy ho mena-mitaha amin�ireo kaominina manerana ny nosy no tena ilofosako, hoy ny dokotera Jean Louis Robinson, raha nanontaniana mahakasika ny fifidianana Filoham-pirenena amin�ny 2018.
Vondrona MAPAR Tezitra mafy amin'ny HVM
Manoloana ireo fanenjehana isan-karazany mahazo ny MAPAR, dia nanao fanambarana tamin'ny alalan'i Pierre Houlder, mpitondra teniny izy ireo omaly, fa manameloka izao fihetsiky ny HVM ho fahatahorana mafy an'i Andry Rajoelina sy ny MAPAR izao.
Taratasin�i Jean Lany fika an !
Miarahaba Jean ooo ! Tena efa tsy mahatoky anareo intsony anie ny olona e !! Sinema indray, hono, ireny fihetsikareo teny mahazina nisambotra an�i Jeannine ireny.
Fisamborana an�i Claudine A�C Afera hafa mihitsy, hoy ny Bianco
Nanazava ny teo anivon�ny Bianco omaly tolakandro fa tsy ny raharaha Ambohimahamasina no nisamborana ny mpanolotsain'ny filoham-pirenena Razaimamonjy Claudine fa na "Claudine A�C" fa raharaha hafa izay efa nitranga tamin'ny taona 2013 ary mbola mitohy hatramin'izao.
Mpianatra ho mpitsabo eny Ankatso � Havotsory ny namanay ! �
Taorian�ny fiarahan�izy ireo nirodorodo teny amin�ny fitsarana ny alatsinainy lasa teo, dia nitohy tamin�ny alalan�ny fanaovana fitokonana teny amin�ny Esplanade teny Ambohitsaina indray ny hetsiky ny mpianatra ao amin�ny Sampana Fitsaboana eny amin�ny oniversiten�Antananarivo omaly.
Traboina eny Ambodirano Ampefiloha Malaina handao ny trano lay
Tsy maintsy miala ao anaty trano lay mialoha ny faran�ny volana ho avy izao ireo traboina vokatry ny hain-trano etsy Ampefiloha Ambodirano, raha araka ny fanadihadiana natao.
Fanatsarana ny tontolon'ny kabary 10 mianadahy niatrika fiofanana manokana
Akaiky ny fandresen�ny Gasy !
Vaky ny sambon�ny mpitondra malaza amin�ny afera maizina raha ny fahitana azy ankehitriny. Manomboka ny fifaminganana sy ny kajikajin�ny isam-batan�olona ao an-dapa ka miseho masoandro sy tsy takona afenina intsony ny ady na dia niezaka namono afo ihany aza ny lohandohany sasany tany am-piandohana.
THB Tour any Antsirabe Mihoatra ny 100.000 ireo olona andrasana
Hafotaka indray ny ao an-tan�nan�Antsirabe mandritra ny fankalazana ny fetin�ny paska ho avy izao. Hotanterahina any an-toerana ny 15 ka hatramin�ny 17 aprily ho avy izao mantsy ilay THB tour andiany faha-12 karakarain�ny orinasa Star.
Sekoly La Croyance Anjanahary Nilatsaka ny sazy henjana
Nidina teny amin�ny sekoly tsy miankina La Croyance Anjanahary ny minisitry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary omaly folakandro, ka nijery ifotony ny sekoly sy ny fomba fampianarana ao.